BBC Nepali - समाचार - आमरण अनसन तोडदिन: डा. केसी
आमरण अनसन तोडदिन: डा. केसी
पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 16.08.12, 20:14 NST सम्मका समाचार
डा के सीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ
राजनीतिक भागबण्डाका कारण धराशायी बन्दै गएको महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल जोगाउन भन्दै चारदिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा गोबिन्द के सीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ।
तर उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने बताएका छन्।
आमरण अनसन शुरु गरेको चौथो दिन बिहीबार शिक्षण अस्पतालको एउटा हलको भुइँमा डा गोबिन्द के सीलाई सुताइएको थियो।
ज्यान खतरामा पार्नु भन्दा बरु अनशन तोड्नुहुन्छ? कि भन्ने बीबीसीको प्रश्नको जवाफमा डा के सीले आफ्ना मागहरु ठूला नरहेको भन्दै भक्कानिएर गहभरी आशुँ पार्दै भने, "संस्था बचाउन आमरण अनशन शुरु गरेको हुँ, माग पुरा नभै अनशन तोड्दिनं।"
"संस्था बचाउन आमरण अनशन शुरु गरेको हुँ, माग पुरा नभै अनशन तोड्दिनं"
डा गोबिन्द के सी, आमरण अनसनमा बसेका चिकित्सक
डाक्टर के सीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गइरहेको डाक्टरहरुले बताएका छन्।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक दिनेश बिनोद पोखरेलले भने,"उहाँको मुटुमा पनि समस्या देखिन थालेको छ, मेडिकल टिमले सीसीयुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ तर उहाँ होसमै रहेकाले उपचार गर्न मान्नुभएको छैन।"
अध्यक्ष पोखरेलले आफुहरु अनसन सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र दिन बालुवाटार पुगे पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भेट नदिइएको बताए।
डा के सी यस अघि असारमा पहिलोपटक आमरण अनसनमा बसेपछि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा कुमुद काफ्लेलाई नयाँ डीन नियुक्त गरेको थियो।
तर उनले उमेरका आधारमा डेढ महिना पनि नपुग्दै अवकाश पाएका थिए।
डा के सीले अनशन सुरु गरेको भोलिपल्ट सरकारले पुरानै पारामा डा धर्मकान्त बाँसकोटालाई डीन नियुक्त गरेको थियो।
आमरण अनसनका कारण अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भएको छ।
अस्पताल सेवा ठप्प पार्न नपाइने भन्दै प्रगतिशील कर्मचारी संगठनको नाममा शिक्षण अस्पतालको मुख्य ढोका बाहिर केही व्यक्ति रिले अनशनमा बसेका छन्।
आम देशवासीको स्वास्थ्य ठीक पार्ने डाक्टर उत्पादन गर्ने संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा डीन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबण्डा रोक्न शुरु गरिएको आमरण अनसनप्रति समर्थन बढ्दै गइरहेको छ।
मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा के सीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ।
यस अघि पेशागत संघ संगठनहरुको महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको थियो।